Izixhobo zamatyathanga-umenzi wokuhambisa umbane waseSingapore pte ltd
Umatshini wentsimbi oGqibeleleyo, ii-Elements kunye nokudibanisa amaLinki angasemva
Ikhonkco le-roller elichanekileyo liyimpawu ezivelisayo kunye neziguquguqukayo zokuhambisa amandla oomatshini, athi, ngaphakathi Indawo yezicelo zeshishini, sele ithathe indawo yazo zonke ezinye iintlobo zetyathanga ezazisetyenziswa ngaphambili. Umzekeliso ongezantsi ubonakalisa izinto zekhonkco kwiwebhusayithi yakho yangaphandle nakwikhonkco elingaphakathi lekhonkco elilula kakhulu. Njengoko kubonisiwe, ikhonkco lokuhambisa ngokuchanekileyo lesinyithi libandakanya uthotho lweebheringi ezigcinwe kunxibelelwano oluchanekileyo omnye komnye ngokusebenzisa iipleyiti zekhonkco ezinyanzelekileyo. Zonke izinto ezizodwa zibandakanya isikhonkwane sokuthwala kunye nesihlahla apho ujikelezo lwetyathanga. Isikhonkwane sokuthwala kunye netyholo yimeko eyomeleleyo ukuvumela ukucaciswa phantsi koxinzelelo olukhulu, kunye nokulwa nawo wonke umthwalo ophethe uxinzelelo kunye nesenzo sokuhambisa esenziwe ngeeroller roller. Zonke iityathanga zihlelwa ngokungqinelana nenowuthi (umgama phakathi kwamaziko ezikhonkwane ezikufutshane ezithweleyo), ububanzi be roller kunye nobubanzi phakathi kwamacwecwe angaphakathi. Ngokudibeneyo, le milinganiselo ibizwa ngokuba yimilinganiselo yokulinganisa, njengoko ibeka ifom nobubanzi kumazinyo e-sprocket.
Izinto zekhonkco kunye nokunxibelelana okunxibelelanisa kubonisiwe kuphela kwiintlobo phaya. Nceda ujonge kwimveliso efanelekileyo kwiphepha lewebhu kwizinto ezichaphazela amatyathanga obuqu.
Zizindibano ezipheleleyo zokusetyenziswa nazo zonke iisayizi kunye neentlobo zetyathanga. Iyunithi ibandakanya iipleyiti ezimbini zangaphakathi ezicinezelwe ematyholweni ahambisa iiroller. (Ii-hyperlink zangaphakathi ezisetyenziselwa amatyathanga amatyholo azinawo izileyi).